फल र पास्ता सलाद - Thermomix रेसिपीज ThermoRecines
फल र पास्ता सलाद
पास्ता20 मिनेट4 व्यक्ति
द्वारा एलेना Calderon
आज हामी तपाईंलाई एक प्रस्तुत गर्दछौं प्रकाश प्लेट, ताजा र धेरै मौलिक। तेसैले यो फल र पास्ता सलाद छ।
गर्मी मा, गर्मी संग, उनीहरु अधिक चाहान्छन् सलाद को यो प्रकार त्यो पास्ता र फल वा तरकारीहरु को संयोजन। उनीहरु पनि सेवा गर्छन् लाइन को ख्याल राख्नुहोस् र स्वस्थ खानु।
मलाई वास्तवमै मन पर्छ सुन्तला भिनाग्रेट यो भाँडाको लागि। मँ सिरका थप्न सक्दिन, तर तपाई एउटा स्पालेश थप्न सक्नुहुनेछ जबसम्म यो हल्का सिरका हो।
1 फल र पास्ता सलाद
गर्मीमा आनन्द लिनको लागि एक मूल फलमा आधारित सलाद।
रेसिपी प्रकार: पास्ता
खाना पकाउने समय: 20M
सलाद को लागी:
२ colored० रंगीन पास्ता (शेल, ट्युलिप्स, बो, सर्पिलहरू, आदि)
एक्सएनएक्सएक्स एक्सचेंज को एक ओपेरा
बीउ रहित अंगूर
Burgos बाट 12 चीज
सुन्तला vinaigrette को लागी:
२ g० ग्राम सुन्तलाको जुस
Dried सुकेको खुबानी
G० ग्राम किसमिस
२० ग्राम अतिरिक्त कुमारी जैतूनको तेल
1 चम्मच (मिठाई आकार) हल्का सिरका (वैकल्पिक)
पहिले हामी पास्ता बनाउँछौं र यसको लागि हामी पानी, जैतून तेलको ठूलो चम्चा र गिलासमा नुनको चम्मच थप्छौं। हामी प्रोग्राम १० मिनेट, तापक्रम १००º र गति।।
हामी नोजल मार्फत पास्ता थप्छौं (हामी यसलाई थप्दा एकै समयमा यसलाई तान्नको लागि हामी स्केल कुञ्जी थिच्दछौं) र हामी पास्ता प्याकेज, तापमान १००º र चम्चा गतिमा संकेत गरिएको समय। म सामान्यतया १० मिनेट राख्छु
पास्ता खाना बनाउँदै गर्दा, हामी फलहरू धुँदैछौं, छार्दैछौं र फललाई टुक्रा-टुक्रा बनाउँदैछौं। हामी यसलाई ठूलो भाँडामा राख्छौं।
हामी बास्केट प्रयोग गरेर पास्ता फालिन्छौं र फलसँगै कचौरामा राख्छौं।
हामी सिसा धुन्छौं र सुक्छौं।
पुतलीलाई ब्लेडमा राख्नुहोस् र भिनाग्रेटको लागि सबै सामग्रीहरू गिलासमा राख्नुहोस्: सुन्तलाको रस, अतिरिक्त कुमारी जैतूनको तेल, सुक्खा खुर्दानी, किशमिश, नुन, एक चुटकी मरिच र हल्का सिरकाको ड्यास (वैकल्पिक )।
हामी दौरान मिक्स १ seconds सेकेन्ड, गति at मा.
हामी यो भिनाग्रेट, सुक्खा खुबानी र किशमिशको साथ, भाडामा पास्ता र फलहरू सहित थप्छौं। हामी बर्गोसबाट चीज थप्दछौं र सबै चीजहरू मिक्स गर्दछौं।
हामी केहि पुदीना पातहरु संग सजावट गर्न सक्छन्।
यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि कसरी सजीलै Thermomix® मा पास्ता पकाउने तपाइँ यो नुस्खा पछ्याउन सक्नुहुन्छ जहाँ हामी संकेत गर्छौं कि कसरी 250 ग्राम वा पास्ता को 500 ग्राम पकाउने।
थप जानकारी - मीठा पास्ता र फल सलाद
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: चामल र पास्ता, सलाद र तरकारीहरू, सजिलो, सामान्य, १ घण्टा भन्दा कम, गर्मी रेसिपी, शासन, शाकाहारी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » थर्मोमिक्स रेसिपीहरू » चामल र पास्ता » फल र पास्ता सलाद
म सलामहरू मन पराउँछु। धन्यबाद तपाईंलाई धन्यवाद छ
CARMEN लाई जवाफ दिनुहोस्
मलाई आशा छ तपाईको यो मनपर्‍यो, कार्मेन, तपाईले मलाई भन्नुहुनेछ। शुभकामना।
सिल्भिया, मलाई थाहा छ यो यस नुस्खासँग कुनै सरोकार छैन, तर मलाई आशा छ कि तपाईंले मलाई मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ। मैले प्रि-पकाइएको मकैको पिठो किनेको छु किनकि पोर्चुगलमा मैले प्रयोग गरेकोलेदेखि नै म कन्र्नब्रेड बनाउन चाहिरहेको छु। के तपाईलाई कुनै नुस्खा थाहा छ?
तपाईको अद्भुत ब्लगका लागि धन्यबाद।
नमस्कार मोनिका, मैले व्यसनीको साथ लिंक राखें। http://www.recetario.es/receta/1499/pan-de-maiz.html। अभिवादन र म धेरै खुसी छु कि तपाईलाई हाम्रो ब्लग मनपर्‍यो।
टुना र सेतो शतावरी केक